प्रेमीले अर्कैसंग विवाह गर्न लागेको थाहा पाएपछि प्रेमिकाले जे गरिन…. – Sanjal Nepal
Homeसमाचारप्रेमीले अर्कैसंग विवाह गर्न लागेको थाहा पाएपछि प्रेमिकाले जे गरिन….
April 9, 2021 admin समाचार 352
प्रेम सम्बन्धमा रहेकी एक नर्सले प्रेमीले अर्कैसंग विवाह गर्न लागेको थाहा पाएपछि ते जा व छ्या’पे’की छन् । घाइते प्रेमिको निधन भएको छ भने प्रेमीका पनि घाइते छन् । यो घटना भारत आगराको हो । आगराको राम र ताज शहरमा भएको यो घटना आजतकले लेखेको छ ।
प्रेमिकाले छ्यापेको ते जा व वाट घा/इते प्रेमिको उपचारका क्रममा नि ध न भएको छ । आग्रा जिल्लाको हरिपर्वत पुलिस स्टेशनमा सो घटना बारे जानकारी आएको हो । सोनम नामकी केटीले देवेन्द्र नाम गरेकी प्रेमी माथि घटना गराएकी हुन् । पुलिसका अनुसार प्रेमीको बिहे अन्तै तय भएकाले प्रेमिका रि सा ए की थिइन् ।
यस पछि घाइतेलाई सिंकदाराको अस्पतालमा भर्ना गरियो । उपचारका क्रममा उनको निधन भयो । पुलिसका अनुसार ती महिला आग्रामा रहेको निजी अस्पतालमा नर्सको रूपमा कार्यरत छिन् । त्यो युवक देवेंद्र प्रयोगशालामा सहायकको रूपमा काम गर्थे ।प्रहरीले उक्त युवतीलाई प क्रा उ गरेको छ । युवतीलाई पनि सामान्य चो ट ला गे को छ । उनलाई पुलिसले अस्पतालमा भर्ना गरेको छ । प्रहरीका अनुसार सोनम र देवेन्द्र एक अर्कालाई लामो समयदेखि चिन्थे। उक्त युवक देवेन्द्र मूल रूपमा यूपीका बताइएको छ। युवती एक जिल्लाको बासिन्दा हुन् । दुबै जिल्लाहरू आग्रा नजिक छन् ।
यो पनि , काठमाडौं । खाद्य पदार्थको आयात तथा निर्यातका लागि आवश्याक पर्ने सबैखाले अनुमति एवं प्रमाणपत्र अब एकद्वार प्रणालीबाटै स्वीकार गरिने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले एक सूचना जारी गर्दै व्यवसायीहरुलाई आफ्ना निवेदनहरु नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाटै पठाउन आग्रह गरेको हो ।
February 5, 2021 admin समाचार 1885
November 25, 2020 admin समाचार 4175
एजेन्सी । चर्चित गायक कुमार सानुले छोरा जान कुमारसंग २७ वर्ष देखि भेटेका छैनन् । जान कुमार बिग बोश कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । सो कार्यक्रममा उनलाई अर्का प्रतियोगिले नातावादको विषय उठाएका थिए । बुवा
December 8, 2020 admin समाचार 2763
LEX 18 agenda conversation: Job club (486284)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458393)
Hello world! (384402)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (351916)